Ngwanrọ kacha mma na ngwa ịntanetị maka ụlọ ọrụ njem na ndị njem na 2021
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Technology » Ngwanrọ kacha mma na ngwa ịntanetị maka ụlọ ọrụ njem na ndị njem na 2021
Na -agbasa Akụkọ Europe • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • Ọbịa ọbịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Technology • Ego njem | Atụmatụ njem • Akụkọ dị iche iche
Sistemụ ntinye akwụkwọ kacha mma n'ịntanetị
N'ime ụwa nke teknụzụ dị elu taa, ngwanrọ na ngwaọrụ ndị ọzọ nyeere ọtụtụ azụmaahịa aka ịre ahịa na nkwado ndị ahịa na-enweghị mkpa iku ndị ọzọ.
N'ihi mgbanwe dijitalụ, ngwa ndị dị otú ahụ na -ahụkwa ngwa sara mbara na ụlọ ọrụ njem na njem.
Regiondo na -ekwu na ọ mepụtara usoro ntinye akwụkwọ n'ịntanetị kachasị mma wee nye mmeghe nke Regiondo Bookying Systems maka njegharị na mmemme.
Anyị jụrụ otu ndị na -ahụ maka njem nlegharị anya gbasara ngwa ịntanetị ha enweghị ike ibi na -enweghị.
Regondo na -ekerịta ihe ha chọpụtara iji nyere ndị azụmaahịa aka ịrụ ọrụ nke ọma yana ijikọ nke ọma.
Usoro ntinye akwụkwọ na -enye ngwanrọ ngwanrọ nke na -enye ndị ahịa nwere ike ịme ntinye akwụkwọ n'ịntanetị site na webụsaịtị gị na ọwa ndị ọzọ. Ma olee nke kacha mma n'ahịa?
Nke a bụ ngosipụta Regiondo:
Anyị nwere ike ịkpa oke ntakịrị, mana anyị hụrụ ngwaahịa anyị n'anya ma na -agbasi mbọ ike hụ na anyị nwere ike nyefee akwụkwọ ntinye akwụkwọ kacha mma n'ahịa.
Anyị malitere njem Regiondo na 2011 na Munich, Germany, wee soro ndị ọrụ nlegharị anya na ihe karịrị 8,000 dị egwu gburugburu ụwa rụọ ọrụ kemgbe ahụ.
Ndị ahịa gị na ndị ọrụ gị ga -ahụ nhazi nke Regiondo n'anya. Ọ dị mfe ịnyagharịa ka ị nwee ike ịbanye ozugbo na -enweghị ọzụzụ ọ bụla.
N'agbanyeghị ma ọ bụrụ na ị na -ere tiketi 50 ma ọ bụ 500,000 kwa afọ, e wuru Regiondo iji mee ka ndụ gị dị mfe. Ọkachamara anyị na atụmatụ dị elu zuru oke maka ijikwa nnukwu mpịakọta.
Akụrụngwa Regiondo na -enyocha akwụkwọ gị niile. A na -edekọ, chekwaa ma nyochaa nyocha ngwa ngwa n'ịntanetị, n'ịntanetị na ndị mmekọ.
Kedu ihe kpatara ịhọrọ Regiondo?
Ntinye akwụkwọ niile n'otu sistemụ na -enyere gị aka:
• Ịbawanye ọrịre • Chekwa akụ • Jikwaa arụmọrụ
✓ Na-ebi ndụ njikwa ngwa ahịa ozugbo
✓ Ịtụkwasị obi na etiti njikwa akụ
✓ Anyị na -enyere gị aka ito ngwa ngwa na -enweghị ego itinye ego
✓ Anyị bụ ikpo okwu kachasị mma maka ịde akwụkwọ dị elu
✓ Anyị nwere interface onye ọrụ nwere nghọta.
✓ Anyị na -enye gị njikwa zuru oke na nlele nke ụlọ ahịa tiketi ịntanetị gị.
✓ Onboarding na nkwado otu dị njikere mgbe niile inyere aka.
✓ Akụrụngwa ngwanrọ anyị kachasị maka mgbanwe
✓ Jikọọ na OTA kachasị na otu ịpị
Ịchọrọ ịhụ ka Regiondo na -eme ihe? Dejupụta fọm anyị iji rịọ ngosi ngosi gị n'efu na njegharị ngwaahịa!
FareHarbor na -emepụta ngwa ọrụ siri ike nke na -enyere ndị njem na ndị na -eme ihe omume aka ịrụ ọrụ ha n'ụzọ dị mfe na arụmọrụ. Ha na -enye ngwanrọ ntinye akwụkwọ n'ịntanetị na akụrụngwa maka ụlọ ọrụ njem na ụlọ ọrụ.
Site na otu ndị hụrụ n'anya na-ahụ n'anya, ọtụtụ ndị na-asụ ọtụtụ asụsụ sitere n'akụkụ ụwa niile, Fareharbor kwere nkwa inyere gị aka ito eto.
Kedu ihe kpatara ịhọrọ FareHarbor?
Level ọkwa ụlọ ọrụ, sọftụwia azụ azụ kachasị amasị enyi
Support Nkwado 24/7 gbakwunyere ọzụzụ onwe onye.
Anyị ga -ebufe akwụkwọ ntinye akwụkwọ gị n'ọdịnihu wee melite webụsaịtị gị.
✓ Gbasaa iru gị site na ọwa nkesa ekebere
✓ Anyị bụ ụlọ ọrụ na-eto n'ike n'ike na ụlọ ọrụ na-ahụ maka njem
Iji nweta ngosi ndụ wee hụ ka FareHarbor nwere ike isi baara gị uru, naanị dejupụta fọm ahụ na ebe nrụọrụ weebụ ha.
Bokun bụ onyinye ụlọ ọrụ TripAdvisor Igwe ntinye akwụkwọ n'ịntanetị, Njikwa ọwa, Ndepụta Ngwa & Njikwa akụ, Ahịa B2B, Akụkọ, na webụsaịtị maka njem nlegharị anya na azụmaahịa ọrụ.
Kedu ihe kpatara ịhọrọ Bókun?
Anyị na -enyere gị aka ịmalite ma zụlite azụmaahịa na azụmaahịa gị.
Nweta akwụkwọ ntinye akwụkwọ ọzọ: ree na ọtụtụ ọwa dịka ịchọrọ, rute ndị ahịa ụwa niile
Chekwa oge: mụbaa arụmọrụ gị ma jikwaa ọrụ azụmaahịa gị niile n'otu ebe
Zụlite azụmaahịa gị: nyochaa ohere ka ị too nkesa gị, mụbaa arụpụta ihe gị, wee wuo ụzọ mbata ọhụrụ maka azụmahịa gị
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmalite iji Bókun ị ga -achọ debanye aha maka nnwale efu ha.
Checkfront bụ sọftụwia njikwa azụmaahịa nke igwe ojii emere maka ndị na-ahụ maka njem, ụlọ ọrụ mgbazinye na ndị na-enye ebe obibi.
Kedu ihe kpatara ịhọrọ Checkfront?
Agbagharala akwụkwọ ntinye akwụkwọ ọzọ: were akwụkwọ na weebụsaịtị gị n'oge ọ bụla, ebe ọ bụla nwere nnweta kalenda na -anabata ozi
✓ Kwuo nke ọma na akwụkwọ mgbasa ozi: na-edeba akwụkwọ gị, jikwaa ndoputa na nnweta, wee nweta nghọta ozugbo na azụmaahịa gị niile site na dashboard etiti.
Bee ọrụ gị na ọkara: mezie ọrụ gị ugboro ugboro
Checkfront na -enye nnwale ụbọchị iri abụọ na otu yabụ ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịnweta atụmatụ na nkwado ha, naanị mepụta akaụntụ. Enweghị kaadị kredit ihe achọrọ.
Redzy bụ ngwanrọ ntinye akwụkwọ nkeonwe yana ikpo okwu nkesa, emebere maka ndị na -ahụ maka njem na ọrụ.
Kedu ihe kpatara ịhọrọ Redzy?
✓ Gbanyụọ ọrụ azụmahịa
✓ Njikwa mkpanaka na ihuenyo ọtụtụ
✓ Pịa otu ebe nrụọrụ weebụ
✓ Ịkọ akụkọ azụmahịa dị elu
✓ Onye ọbịa gosipụtara okike
✓ Ngwakọta ọtụtụ: (Zapier, TripAdvisor Review Express, ụlọ ahịa Facebook & ndị ọzọ).
✓ Ọnụego oge na njikwa ọnụahịa
Iji malite mgbanwe gị na Redzy ị nwere ike ịdebanye aha maka ha ikpe n'efu. Enweghị kaadị kredit ihe achọrọ.
Trekksoft bụ usoro ntinye akwụkwọ maka ụlọ ọrụ njem ụbọchị.
Kedu ihe kpatara ịhọrọ Trekksoft?
Ree njem ndị ọzọ site na ijikọ ahịa ihu na azụ gị
Jikwaa arụmọrụ site na njikwa akpaaka na ọrụ aka
Zụlite azụmahịa gị site na ijikọ ndị ahịa gburugburu ụwa
Iji rịọ ngosi na ndị otu mmepe azụmahịa ha, naanị ihe ị ga -eme bụ tọọ oge ngosi ngosi.
Sistemụ Njikwa ọdịnaya
Ngwaọrụ CMS na-enye ngwọta dị ọnụ ala ma dịkwa nchebe maka ndị nwe ha chọrọ ịchịkwa weebụsaịtị ha ma jikwaa ọdịnaya niile dị n'ime ụlọ. Ka anyị chọpụta nke bụ nhọrọ 3 CMS kacha elu nke ndị na -ahụ maka njem.
WordPress bụ sistemụ njikwa ọdịnaya ọdịnaya na-akwụghị ụgwọ n'efu na nke mepere emepe n'ụwa. Ọ bụ enyi-enyi, enwere ike ịhazi ya kpamkpam, dịkwa mfe mmụta. Site na WordPress, ị nwere ike wuo webụsaịtị, bido blọgụ, na ọbụna ree ya n'ịntanetị.
Ntak -ahọrọ WordPress?
✓ WordPress bụ free, ị ga -akwụrịrị ụgwọ maka nnabata
✓ Ọ dị mfe iji na mmụta; a gaghị achọ ihe ọmụma nzuzo
✓ WordPress na -enye gị njikwa weebụsaịtị gị niile; enwere ike ịhazi ya nke ukwuu, ị nwekwara ikike zuru oke na saịtị gị yana data gị niile
✓ A na-ewu ike ịde blọgụ ya na ọ dị mfe ijikọ
✓ Ị nwere ike ịgbatị arụmọrụ saịtị gị ngwa ngwa site na iji plugins
✓ Ọtụtụ puku ego dị ọnụ ala (ụfọdụ n'ime ha n'efu) enwere ike ịhazi isiokwu dị n'ịntanetị
Websites Weebụsaịtị WordPress bụ SEO enyi na enyi na -anabata
✓ Ị nwere ohere ngwa mkpanaka maka ijikwa saịtị gị n'oge ọ na -aga
✓ Usoro a na -enye njikwa mgbasa ozi dị ike
✓ Akwa arụmọrụ na nchekwa
Iji malite weebụsaịtị ma ọ bụ blọọgụ gị, mepụta akaụntụ WordPress.com!
Squarespace bụ sistemụ njikwa ọdịnaya nwere otu na-enye ụlọ ebe nrụọrụ weebụ, nnabata, yana azịza E-azụmahịa.
Kedu ihe kpatara ịhọrọ Squarespace?
✓ Ọ bụ otu n'ime ndị na -ewu weebụsaịtị kachasị mfe iji
✓ Ndebiri webụsaịtị dị elu dị maka ụdị weebụsaịtị dị iche iche n'etiti nke Pọtụfoliyo, blọọgụ, ibe ọdịda, na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị.
✓ SEO arụnyere
✓ Mfe ọrụ onye ọrụ
SSL efu Asambodo
✓ Nhazi dị mma maka ikiri mkpanaka
✓ 24 / 7 Nkwado Ndị Ahịa
✓ E-Commerce ejikọtara ọnụ
Iji malite na Squarespace, ịkwesịrị iburu ndebiri dabara na azụmaahịa gị wee mepụta akaụntụ. Squarespace Ọ B .GH. nwee atụmatụ efu yabụ ozugbo webụsaịtị gị dị njikere ịmalite, ịkwesịrị ịhọrọ atụmatụ wee denye aha.
Webflow bụ ngwakọ ngwakọ n'etiti ngwaọrụ ụlọ ebe nrụọrụ weebụ ọdịnala dị ka Squarespace, sistemụ njikwa ọdịnaya dị ka WordPress, yana weebụsaịtị siri ike (ma ọ bụ weebụsaịtị na-abụghị CMS).
Kedu ihe kpatara ịhọrọ Webflow?
✓ Ha niile nọ n'otu ikpo okwu na -ejikọ CMS, ngwa ahịa, nkwado ndabere na ihe ndị ọzọ
✓ Webflow na-enye gị nnwere onwe ịmepụta weebụsaịtị ahaziri nke ọma: mezie ihe niile site na nsuso ruo ogologo-elu ma melite ụdị agba ọ bụla na sekọnd
✓ A kwaaji na -ahụ anya nke ahụ anaghị achọ itinye koodu ọ bụla
✓ Dọrọ na dobe arụmọrụ onye nrụpụta ibe
✓ Ị nwere ike ịmepụta eserese na mmekọrịta ngwa ngwa
✓ Nhazi peeji ndị na -anabata
✓ Weebụsaịtị webflow bụ SEO enyi na enyi
✓ Kpọọ ndị editọ na ndị ọrụ ibe ka ịgbakwunye ma nyochaa ọdịnaya na weebụsaịtị gị
✓ Ngwọta nnabata dị ike
✓ SSL efu Asambodo
✓ Na-efu ruo mgbe ị dị njikere ịmalite
Ka inyocha ikpo okwu, ị ga -achọ debanye aha maka akaụntụ Webflow n'efu na ntanetị.
Ngwa ahịa na -enyere gị aka ịkwalite usoro gị yana ịbawanye ego mgbe ị na -edobe ma hazie data ndị ahịa niile na nchekwa. Nọgidenụ na -agụ iji nyochaa ndị njem na ndị na -enye ọrụ na -eji.
Apollo bụ usoro ntinye aka nke data na-enyere gị aka imezu, nyochaa, ma melite atụmatụ uto gị.
Ntak -ahọrọ Apollo?
✓ Apollo na -enyere gị aka ịpị nọmba gị
✓ Chọta ezigbo atụmanya gị na ndị ndu ọhụrụ
✓ Gbaa email & mkpọsa mkpọsa
✓ Hazie nzukọ
✓ Nyochaa ma megharịa usoro gị
EGO atụmatụ na ngosi ngwanrọ dị
Ị dịla njikere ịnwale Apollo? Tinye email ọrụ gị na malite maka FREE. I nwekwara ike nweta DEMO ịhụ ka Apollo na -enyere ụlọ ọrụ aka ịrụ usoro a na -emegharị maka ịtọ nzukọ, imechi ego, yana inyocha usoro ahịa na ahịa.
Qwilr bụ sọftụwia akwụkwọ weebụ ọgbara ọhụrụ nwere ngwakọta na ndebiri dị iche iche. Ị nwere ike ịmepụta amụma na -enye aka nke na -enyere aka mechie azụmahịa ndị ọzọ.
Kedu ihe kpatara ịhọrọ Qwilr?
✓ Mepụta amụma omenala n'otu pịa na -ahapụghị CRM gị
✓ Weta data ọnụahịa ozugbo na CRM gị
✓ Qwilr na-enye atụmatụ dị iche iche emegoro tupu oge gara aga yana ọbá akwụkwọ nke ihe ndị ọzọ enwere ike iji mepụta atụmatụ pụrụ iche dabara na ntuziaka ika gị.
✓ Ị nwere ike ịmepụta ekele vidiyo mmekọrịta, ọmụmụ ihe, ma ọ bụ ngosi ngwaahịa
✓ Ị nwere ike inyere ndị na -azụ ihe aka site na ihe mgbako ROI na -emekọrịta ihe na ntinye ahaziri ahazi
✓ Nchịkọta ibe zuru ezu dị
✓ Ịnwere ike ịgbakwunye nkwenye e-sign
W Qwilr na -enyere gị aka akpaaka akwụkwọ ọnụahịa yana enwere ike jikọta ya na usoro ịkwụ ụgwọ dị iche iche
Ị nwere ike nwalee Qwilr maka FREE ma ọ bụ rịọ ngosi ngosi efu na webụsaịtị ha - naanị debanye aha maka akaụntụ Qwilr.
Ngwa ahịa akpaaka na -enyere gị aka ịrụ ọrụ nke ọma site na ịchekwa gị oge na ịhazi mkpọsa gị tupu oge eruo. Ka anyị lelee nke kacha arụ ọrụ maka ụlọ ọrụ njem na ndị njem.
Mailchimp bụ ikpo okwu akpaaka ahịa ama ama nke na -enye ahịa email, ụlọ webụsaịtị na ọrụ mgbasa ozi dijitalụ. Ọ na -enye gị ohere ijikọ data ndị na -ege gị ntị, ọwa ahịa, yana nghọta ọnụ.
Kedu ihe kpatara ịhọrọ Mailchimp?
✓ Mepụta ozi ịntanetị, mgbasa ozi mmekọrịta, ibe mbata, akwụkwọ ozi na ihe ndị ọzọ site n'otu ebe
✓ Ngwa ihe eji arụ ọrụ dị mfe yana ndebiri na-agbanwe agbanwe maka ozi ịntanetị gị, ibe mbata na ụdị ya
✓ Onye inyeaka okike nke AI na-akwado iji mepụta atụmatụ omenala
✓ Debe data gị na nghọta gị niile n'otu ebe
Support Nkwado 24/7 nkwado mmeri
✓ Ngwakọta 250+ iji jikọọ ngwaọrụ gị niile na Mailchimp
✓ Akwụkwọ ndekọ nke ndị a tụkwasịrị obi
Ị nwere ike malite na MailChimp na weebụsaịtị ha wee budata ngwa mkpanaka ha maka gam akporo ma ọ bụ iOS. Enwekwara atụmatụ efu - ị nwere ike izipu ozi ịntanetị 10,000 kwa ọnwa yana 2,000 kwa ụbọchị n'efu.
Ihe akaebe bụ ngwa kachasị mma maka iwulite ntụkwasị obi na ika gị. Ọ na -ewepụta mmapụta na webụsaịtị gị nke na -egosi nri dị ndụ ma ọ bụ ọnụọgụ ndị ezigbo mmadụ mere ihe n'oge na -adịbeghị anya ma ọ bụ gaa na saịtị gị. Site na ịgbakwunye ya na ọdụ ahịa gị, ị nwere ike ịtụgharị ndị ọbịa ruru 300% ka ha bụrụ ndị ndu, ngosi na ahịa.
Jiri ihe akaebe iji:
Mepụta ụkọ site na ịgụta ọnụ ndị ọbịa
Wulite ntụkwasị obi na Hot Streaks
Mee ka ntụkwasị obi sie ike site na Mmemme Ọhụrụ
Gịnị kpatara ị ga -ahọrọ ihe akaebe?
✓ Mfe idozi
✓ Ntọala omenala
✓ Nchịkọta mara mma
✓ Mmekọrịta Zapier
✓ Freaky ngwa ngwa ibu ọsọ
✓ A / B ule
Ha na -enye ọnwa 1 ugbu a FREE - naanị ịkwesịrị ịwụnye pixel ahịa ihe ngosi na weebụsaịtị gị (lee) wee hụ ma ọ na -enwetara gị ahịa karịa.
Buffer bụ ngwa nhazi usoro mgbasa ozi na -elekọta mmadụ nke ihe karịrị ụlọ ahịa 75,000 na -eji n'ụwa niile. Na mgbakwunye na ịhazi mkpọsa gị, ị nwere ike iji Buffer tụọ ma kọọ banyere arụmọrụ ya wee rute.
Kedu ihe kpatara ịhọrọ nchekwa?
✓ Hazie ma hazie akụkọ Instagram gị na weebụ ma ọ bụ na ekwentị
✓ Jikọọ “njikọ gị na bio” na ọtụtụ URL ndị elere na ibe ahịa
✓ Gụnye okwu izizi mgbe ị na -ahazi posts Instagram
✓ Mepụta, chekwaa ma hazie hashtags iji rụọ ọrụ na posts Instagram gị
✓ Tinye ọnọdụ ọnọdụ gị na mkpado onye ọrụ ka ị na -ahazi posts na Instagram
✓ Tụọ arụmọrụ nke akụkọ, posts n'otu n'otu, na hashtags
✓ Wulite akụkọ omenala wee kesaa ndị otu gị n'ụzọ dị mfe
✓ Enwe a FREE plan
Nweta azịza nye ajụjụ ndị a na -ajụkarị gbasara atụmatụ mgbasa ozi mmekọrịta gị
Ọ bụrụ n'ịchọrọ inyocha nnukwu atụmatụ Buffer naanị họrọ atụmatụ dabara na mkpa gị yana bido ikpe ikpe gi n'efu.
N'ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, mgbado anya anyị dabara na ngwaọrụ njikwa ọrụ. Inwe njikwa na usoro niile na usoro ọrụ dị mkpa maka ndị na -eweta njem na ndị na -enye ọrụ. Ngwa njikwa oru ngo so n'ime ụzọ kachasị mma iji hụ na agbasoro usoro niile. Ọzọkwa, ha dị oke mma idobe otu ahụ mgbe ha na -abawanye arụmọrụ ha.
Chọpụta ihe gbasara sistemụ njikwa ọdịnaya ọkacha mmasị nke ndị njem na ndị na -enye ọrụ.
Asana bụ ngwa weebụ na ngwa mkpanaaka ahaziri iji nyere ndị otu aka ịhazi, soro na jikwaa ọrụ ha.
Ọ na -enye gị ohere ịkụda ọrụ gị yana ịrụ ọrụ ugboro ugboro ka ọ bụrụ ọrụ a na -ejikwa, nke ọ bụla nwere ụbọchị ọ ga -eme, subtasks, assignees na njirimara ndị ọzọ.
Na ya Kanan bọọdụ, Asana na -agbanwezi ugbu a ka ị nwee ike ịhazi usoro ọrụ gị n'ụzọ ezi uche dị na ya maka azụmahịa gị. Lelee ya na vidiyo dị n'okpuru:
Kedu ihe kpatara ịhọrọ Asana?
✓ Hazie ọrụ gị n'ime ọrụ nkekọrịta dị ka ndepụta ma ọ bụ bọọdụ Kanban
✓ Jiri anya nke uche hụ ebe nlele dị mkpa na ọrụ gị iji tụọ ma kesaa ọganihu
✓ Nye ọrụ onye nwe ya doro anya, yabụ onye ọ bụla maara onye ọ dị n'aka
✓ Kewaa ọrụ n'ime Subtasks na ngalaba
✓ Hazie ọrụ na mpaghara Omenala
✓ Na -ekwurịta okwu n'ime ihe aga -eme
✓ Nwelite mmelite oru ngo
✓ Mekọrịta Asana na nyiwe ndị ọzọ.
Ị nwere ike debanye aha na Asana.com ma jiri ngwa a akwụghị ụgwọ maka ihe ruru ndị otu 15. A kpọchiri ụfọdụ atụmatụ dị elu mana ị ga -enwe ihe niile ịchọrọ ibido na atụmatụ efu. Enwekwara ụdị mkpanaka maka gam akporo na iOS ka ịdebe ihe na -aga.
Yiri Asana, Trello bụ ikpo okwu maka njikwa ọrụ otu. Agbanyeghị, ihe kacha elekwasị ya anya bụ na bọọdụ kanban na ịdị mfe nke iji ya.
Kedu ihe kpatara ịhọrọ Trello?
✓ Ọdịdị nlele dị mfe yana arụmọrụ ịdọrọ na dobe kensinammuo
✓ Ike mmekorita siri ike - jikọta ngwaọrụ kachasị arụ ọrụ
✓ Ngwaọrụ enweghị koodu
✓ Mee ka nkwurịta okwu dị mfe dịrị n'etiti otu
✓ Kaadị nwere ozi niile ịchọrọ
Nke a bụ ihe anyị na -eji na Regiondo iji debe ọrụ anyị n'ofe ụlọ ọrụ niile. N'ihe karịrị ndị ọrụ 50, anyị na -eji Trello imekọrịta ọrụ n'ofe ngalaba dị iche iche ka anyị nwee ike rụọ ọrụ nke ọma wee tinye usoro ntinye akwụkwọ anyị n'ịntanetị.
Iji malite imekọrịta na ijikwa ọrụ gị na Trello, naanị debanye aha na email gị na ebe nrụọrụ weebụ ha.
Monday.com bụ webụ weebụ ọzọ nwere ike ịhazi yana igwe njikwa ọrụ mkpanaka yana ihe ọzọ ama ama na Asana. Adobe, Wix, Universal, Walmart, na ọtụtụ ụdị ụwa ndị ọzọ na -eji ya.
Kedu ihe kpatara ịhọrọ Mọnde?
✓ Ọ dị mfe iji - tọọ bọọdụ ọrụ ngwa ngwa
✓ Ọ bara uru ma dị mfe ịgbaso nkuzi dị na ntọala ihe ọmụma
✓ Bọọdụ nkeonwe na nke ọha
✓ Nkwurịta okwu na ọkwa dị mma iji rụọ ọrụ (kpado ndị mmadụ ma nata ọkwa mgbe akpadoro)
✓ Ị nwere ike ịhapụ nkwupụta ndụ na ihe ngosi
✓ Ị nwere ike idetuo na mado na Adobe
✓ Nchịkọta ọnụego na mkpesa dị elu
✓ Nkwado dị maka ndị debanyere aha niile ọ bụghị naanị ndị ahịa adịchaghị mma
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na Mọnde, naanị soro njikọ ịmalite na usoro ole na ole dị mfe
Ngwá ọrụ ngwanrọ e mere maka ma jiri ụlọ ọrụ njem na -ewu ewu maka ihe kpatara ya. Ha na -enyere ọtụtụ puku ụlọ ọrụ aka ịrụ karịa na atụmanya ha kwa ụbọchị.
Anyị nwere olile anya na nhọrọ anyị na -enyere gị aka ịchọta ndị ziri ezi maka njegharị gị ma ọ bụ ụlọ ọrụ na -emecha meziwanye mmekọrịta ndị ahịa gị yana arụmọrụ dị n'ime.